လိင်တူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်တဲ့ Jackie Chan ရဲ့ သမီး Etta Ng - The Lifestyle Myanmar
Home Entertainment လိင်တူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်တဲ့ Jackie Chan ရဲ့ သမီး Etta Ng
လိင်တူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်တဲ့ Jackie Chan ရဲ့ သမီး Etta Ng
ကမ္ဘာကျော်ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီး Jackie Chan ရဲ့သမီး အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ် Etta Ng တစ်ယောက် လိင်တူ လက်ထပ် လိုက်ပါတယ်။ Etta Ng ကတော့ ဒီအကြောင်းကို Instagram မှာ နိုဝင်ဘာ (၂၆)ရက်နေ့က အသိပေးလိုက်တာပါ။
လက်ထပ် စာချုပ် ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ စုံတွဲ ပုံကို တင်ပြီး သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာသ တင်းကို အသိပေး လိုက်တာပါ။Etta Ng ကတော့ ဂျက်ကီချမ်းနဲ့ သူ့ရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းဇနီးဟောင်း အလှမယ် Elaine Ng တို့ရဲ့ သမီးပါ။
ပုံထဲမှာတော့ နှစ်ယောက်သားလက်ထပ်စာချုပ်ကို ကိုင်ပြီး နမ်းနေကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။မီဒီယာတွေရဲ့ ပြောပြချက် အရ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ကနေဒါမှာ လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတာပါ။ပုံရဲ့ Caption မှာတော့ “United by love & law. On our wedding day~” ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။
Caption အပြည့်အစုံမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကြီးပြင်းမလာခဲ့ကြရတဲ့ သူတွေဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ Etta ကတော့ မိသားစုတွေရှိတဲ့ အိမ်တ စ် လုံးကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း၊ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်း အထီးမကျန်တော့ဘူး၊အချစ်ဆိုတာက မိသား စု ဆိုတဲ့အရာထက်ပိုပြီး ခိုင်မာတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာတုန်းက Etta နဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူ Andi Autumn တို့ရဲ့ ပုံတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။ Andi Autumn ကတော့ သူမထက် (၁၂)နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်။Autumn ကတော့ အသက် (၃၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး ကနေဒါ ဆိုရှယ်မီဒီယာ Star တစ်ယောက်ပါ။
သူတို့စုံတွဲဟာ ကနေဒါမှာ မေလတုန်းက multimedia ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းက YouTube video တစ်ခုမှာ လိင်တူချစ်မြတ်နိုးမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မိဘ တွေကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကမ်ဘာကြျောဟောငျကောငျမငျးသားကွီး Jackie Chan ရဲ့သမီး အသကျ(၁၉)နှဈအရှယျ Etta Ng တဈယောကျ လိငျတူ လကျထပျ လိုကျပါတယျ။ Etta Ng ကတော့ ဒီအကွောငျးကို Instagram မှာ နိုဝငျဘာ (၂၆)ရကျနကေ့ အသိပေးလိုကျတာပါ။
လကျထပျ စာခြုပျ ကို ကိုငျဆောငျထားတဲ့ စုံတှဲ ပုံကို တငျပွီး သူတို့ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ မင်ျဂလာသ တငျးကို အသိပေး လိုကျတာပါ။Etta Ng ကတော့ ဂကျြကီခမျြးနဲ့ သူ့ရဲ့ တိတျတိတျပုနျးဇနီးဟောငျး အလှမယျ Elaine Ng တို့ရဲ့ သမီးပါ။
ပုံထဲမှာတော့ နှဈယောကျသားလကျထပျစာခြုပျကို ကိုငျပွီး နမျးနကွေတာကို တှရေ့မှာပါ။မီဒီယာတှရေဲ့ ပွောပွခကျြ အရ သူတို့နှဈဦးဟာ ကနဒေါမှာ လကျထပျမှတျပုံတငျခဲ့ကွတာပါ။ပုံရဲ့ Caption မှာတော့ “United by love & law. On our wedding day~” ဆိုပွီး ရေးထားပါတယျ။
Caption အပွညျ့အစုံမှာတော့ သူတို့နှဈယောကျဟာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ကွီးပွငျးမလာခဲ့ကွရတဲ့ သူတှဆေိုပွီး ရေးထားပါတယျ။ Etta ကတော့ မိသားစုတှရှေိတဲ့ အိမျတ ဈ လုံးကို ကိုယျတိုငျရှေးခယျြနိုငျကွောငျး၊ဘယျတော့မှတဈယောကျတညျး အထီးမကနျြတော့ဘူး၊အခဈြဆိုတာက မိသား စု ဆိုတဲ့အရာထကျပိုပွီး ခိုငျမာတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈအောကျတိုဘာတုနျးက Etta နဲ့ သူမရဲ့ ခဈြသူ Andi Autumn တို့ရဲ့ ပုံတှေ ထှကျပျေါ လာခဲ့ပါတယျ။ Andi Autumn ကတော့ သူမထကျ (၁၂)နှဈလောကျကွီးပါတယျ။Autumn ကတော့ အသကျ (၃၁)နှဈဖွဈပွီး ကနဒေါ ဆိုရှယျမီဒီယာ Star တဈယောကျပါ။
သူတို့စုံတှဲဟာ ကနဒေါမှာ မလေတုနျးက multimedia ကုမ်ပဏီ တဈခု ထူထောငျခဲ့ပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ဧပွီလတုနျးက YouTube video တဈခုမှာ လိငျတူခဈြမွတျနိုးမှုကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ မိဘ တှကွေောငျ့ သူတို့နှဈယောကျဟာ အိမျယာမဲ့ဖွဈနပွေီဆိုပွီး ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
Jackie Chan ရဲ့ သမီး Etta Ng
Previous articleပြည် ရွှေဆံတော်တွင် ရဲမေကို ပါးရိုက်သည့် ရဲဝန်ထမ်း မိသားစုဝင်များ ပြန်တောင်းပန်ရ
Next articleတောင်/ မြောက် – ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရဲ့ ကွာဟချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်များ